Érik Lamela oo u mahad celiyay Lionel Messi inkastoo ay guuldaro kasoo gaartay kulankii xalay ee Champions League – Gool FM
(Tottenham) 04 Okt 2018. Xidiga kooxda Tottenham Hotspur Érik Lamela ayaa uga mahadceliyay dhigiisa Barcelona ee Lionel Messi, kadib markii uu u ogolaaday inay kala badashaan maaliyadaha, kulankii xalay ku wada wada ciyaareen labada kooxood tartanka Champions League.
Kooxda Barcelona ayaa garoonka Wembley ku xasuuqday kooxda Tottenham Hotspur markii ay kaga badiyeen 4-2.
“Messi wuxuu ahaa mid cajiib ah kulankii aan wada ciyaarnay, waxaana uu muujiyay awoodiisa iyo qibradiisa weyn uu kala soo hor muuqdo kulan kasta, waa ciyaaryahanka ugu fiican adduunka, qof kastana wuu ogyahay”.
“Waxaan u mahadcelinayaa Lionel Messi, sababtoo ah wuxuu i siiyey maaliyadiisa kadib ciyaarta”.
“Kadib ciyaarta waan wada hadalnay, waxaan is dhaafsanay erayo, sababtoo ah ma aanan arag isaga mudo dheer, matka aan isaga arko in badan ayaan ku farxayaa, waa hubaal waa ciyaaryahanka aduunka ugu fiican”.
Deschamps oo iska fogaayeena in wax lug ah uu ku yeesho khilaafka ka dhexeeya Pogba iyo Mourinho